I-Kasem Lighting Co., Ltd. izimisele ukuyila, ubunjineli kunye nokuvelisa ugcino lwamandla olutsha, iimveliso zokukhanyisa ezixabisa ukhuphiswano ukubonelela abathengi bethu ngeenzuzo ezintle zoqoqosho kunye nokusingqongileyo.
Inkampani yasekwa liqela leengcali zokukhanyisa ezibalaseleyo ezineminyaka engaphezu kwe-15 yamava ekuyileni izibane zamashishini ezisebenza kakuhle.I-Kasem Lighting iseke igama layo njengomvelisi wokukhanyisa owaziwa kakhulu.
Iimveliso zeKasem Lighting zibonelela ngezixhobo zokukhanyisa ezikumgangatho ophezulu ezidibanisa uqoqosho, ukuthembeka kunye nokusebenza kakuhle kwamandla kwizicelo zokukhanyisa.Umgca wethu wemveliso oyingqayizivele uquka i-low-profile kunye nezibane eziphezulu ze-LED zesikhukula, isibane sesitalato se-LED, amandla e-Solar, ukukhanya kweGadi, ukukhanya kwe-High bay..etc..kunye nalo lonke uhlobo lokukhanya kwangaphandle.
Ngelo xesha, ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zemarike, ngo-2016, kuvavanywa uphando kunye nophuhliso kunye nokuveliswa kweebhetri ze-lithium zelanga, kwaye ziphuhlise ngempumelelo ulawulo oludibeneyo lwexesha lokukhanya kwe-lithium ibhetri ye-solar street lights.Ifumene inani lamalungelo awodwa omenzi wechizi kwaye isetyenziswa kakhulu kulwakhiwo lweendawo ezintsha zasemaphandleni.Indumiso ephezulu evela kubathengi.
Sizama ukugqwesa kunye nokuqina kuzo zonke izibane ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu balindele ubomi obude kunye nokusetyenziswa okungenazinkathazo.Sinentsebenziswano yexesha elide kunye neenkampani ezihamba phambili kwishishini kwaye siqokelele ubutyebi bemveliso kunye nolwazi lwesicelo, esenza ukuba sifanelekele ukukunceda kwiiprojekthi ezincinci zokukhanyisa ezinkulu.
INkcubeko yethu yeNkampani
Ukususela ekusekweni kweKasem Lighting ngo-2009, iqela lethu le-R&D likhule ukusuka kwiqela elincinci ukuya kubantu abangaphezu kwe-100.Indawo yomzi mveliso iye yanda yaya kutsho kwi-50.000 yeemitha zesikwere, kwaye ingeniso ngo-2019 ifikelele kwi-25.000.000 yeedola zaseMelika kwi-swoop enye.Ngoku siye saba yinkampani enomlinganiselo othile, onxulumene ngokusondeleyo nenkcubeko yenkampani yethu:
Ingqikelelo ephambili yi "Kasem Lighting, Beyond Self".
Umnqophiso wenkampani "kukudala ubutyebi kunye noluntu oluxhamlayo".
Unesibindi sokuyila into entsha: Olona phawu luphambili kukuba nenkani, ukuba nesibindi sokuzama, ukuba nesibindi sokucinga kunye nokwenza.
Namathela kwingqibelelo: Ukunamathela kwintembeko yeyona nto iphambili yokukhanya kweQassim.
Ukukhathalela abasebenzi: tyala amashumi amawaka eeyuan minyaka le kuqeqesho lwabasebenzi, misela ikati yabasebenzi, kwaye unike abasebenzi izidlo ezithathu ngosuku simahla.
Yenza konke okusemandleni ethu: UWanna unombono omhle, ufuna imigangatho ephezulu kakhulu yomsebenzi, kwaye usukela "ukwenza wonke umsebenzi ube yimveliso elungileyo."